indawo yokugcina izinto
ishalofu lezitolo ezinkulu
Ungawakhetha kanjani amashalofu esitolo
Lapho ukhetha amashalofu esitolo, qala ngokubheka inkinga ethwala umthwalo. Ungakhethi amashalofu athwala umthwalo owodwa. Khetha amashalofu wokulayisha alele phansi. Lapho uthenga, khetha ubude obufanele be-laminate ngokuya ngezidingo zokusetshenziswa, nesimo, faka umbala ...
Ziyini izimbangela zokugoba ishalofu?
Amashalofu ayimishini yokugcina ebalulekile endlini yokugcina impahla, ukwakheka kulula, ukuqaqa nokufaka, kuthandwa ukuthengwa kwebhizinisi lefektri, kepha amashalofu avela ukugoba ukusonteka akuvamile, ekugcineni siyini isizathu? Shelf eguqa ukusonteka kanjani? 1.I ...
Umehluko phakathi kwamashalofu esitolo kanye nendawo yokugcina izinto
Amashalofu angabonakala yonke indawo emafektri ezinkampani, ezikhungweni zokuphathwa kwezimpahla nakwezinye izindawo. Lapho siya ezinxanxatheleni zezitolo nasezitolo ezisezingeni eliphakeme ukuthenga izinto, singabona amashalofu ezitolo ezinkulu. Ngoba banokuhluka okuningi, kusetshenziswa ezimweni ezahlukahlukene. Ngezansi senza ukuqhathanisa kwe ...
Ukugcinwa nokunakekelwa kwendawo yokugcina izimpahla
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe, uchungechunge lwezinhlelo zokugcina izinto, ezifana nokukhanya, okumaphakathi nokusindayo, kanye namaraki e-loft esizukulwaneni esisha sama-racks, akhiwe kakhulu ngezakhiwo ezihlanganisiwe. Inhlanganisela edidiyelwe yamaraki wesitoreji ithola ukunakwa okuningi nokuningi. Okukhululekile ...
AmaYuanda Shelves azibophezele ekuvikeleni imvelo nokukhiqizwa okungenakho ukungcola.
Imboni yeshalofu yendabuko, ikakhulukazi ingxenye yeshelufu lesitoreji, empeleni, izinto zalo zokusetshenziswa ikakhulukazi ziyinsimbi. Ngemuva kokugingqika, ukushisela, ukukhethwa, ukufafazwa, nokufafazwa, ekugcineni kuzoba izingxenye zamashalofu, kuthi ngemuva kokuhlangana kube ngamashalofu aqediwe. . Ngi ...
Ama-racks wesitayela sakwa-Suzhou loft asebenzisa kakhulu indawo yokugcina impahla
Sonke isakhiwo se-loft-style rack rack sihlanganisiwe, akudingeki ukuthi kushiselwe indawo esizeni, futhi konke kuhle futhi kunesandla esivulekile. Uma kuqhathaniswa nokwakhiwa kokhonkolo noma ukwakheka kwensimbi yesigaba, ngoba ishalofu lesitezi phansi ngokwalo lidlala umphumela wokusekela we ...
Ukutholwa kohlelo lokwakhiwa kweshelufu lesitoreji seSuzhou kudinga ukubamba iqhaza okusebenzayo kwezinhlangano zombili zokuphakela nezokufuna
Ukutholwa kohlelo lokuklama isitoreji seSuzhou kudinga ukubamba iqhaza okusebenzayo kwawo womabili amaqembu wokuphakela nawokufuna. Ngesidingo esikhulayo samaraki wokugcina namuhla, ama-rack rack abe kancane kancane abe yindawo yokugcina ebalulekile emafektri ezinkampani. Ishalofu lokugcina isitoreji ...
Indlela yokuthuthukiswa kwenethiwekhi yeSuzhou Shelf, imboni yendabuko
Akungabazeki ngokusebenziseka kalula kwe-Intanethi kubantu. Abantu bavame ukusebenzisa "i-Intanethi enamandla onke" ukuchaza ubulula nakho konke okuhlanganisa iminyaka ye-Intanethi. Ayikho imikhiqizo kwi-Intanethi ongeke wayithenga, kuphela ongeke uyicabange, kusuka ...
Ikheli:IZhangcun Industrial Park, iWangzhuang Town, Changshu, iSuzhou Idolobha, Isifundazwe saseJiangsu, eChina